Symbian Myanmar - Saturngod
Posted on Updated February 10, 2010 by saturngod
« Apple Core i7 Macbook Pro ? Sorry, some of your comment in SPAM »
7 ရက်နေ့ကထဲကအကို့ရဲ့ ဘယ်ပို့စ်မှာလဲမသိဘူး.. ဒီ လင့်ခ်ကို ကျတော် cmt ပေးခဲ့တယ်.. ကြည့်ရတာ ကော်နက်ရှင်အခြေအနေကြောင့်ထင်တယ်.. လုံးဝတင်လို့မရဘူးဖြစ်တာ..
အဲ့ဒီ sybian myanmar နဲ့ပတ်သက်ပီးတော့ ဘာများဂေါက်နေလဲတော့မသိဘူး၊
သူကတော့ s60v5 အတွက်လို့ပြောတယ်. (unHack system အတွက်ပါရတယ်ပြောထားတာ)
ကျတော် ပထမကတော့ 6120c မှာထဲ့တယ်၊ မရလို့ဆိုပီး n95 နဲ့ n85 မှာသွင်းကြည့်တယ် (helloOX နဲ့ hack ပီးသားတွေပါ)
c: မှာထဲ့ရင် constrain by certificate လို့လားမသိဘူးပေါ်တယ်
e: မှာထဲ့ရင်ကျတော့ update error ဆိုပီး ပေါ်တယ်
ဒီလိုနဲ့ တစ်ညဆိုင်းလိုက်ရတယ်၊ နောက်တစ်ရက်မှာ အကိုတစ်ယောက်ရဲ့ 5800XM နဲ့ ချကြည့်တယ်၊ ရလောက်မယ်ပေါ့.. ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာ. ပြဿနာက ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်နေလေရော..
ဒီလိုနဲ့သူ့ sis ကို ဖြည်ပီးတော့ font နဲ့ config* ဖိုင်တွေကို သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ Directory အတိုင်းလိုက်ထဲ့ကြည့်တယ်…
စက်တက်တက်ချင်းမှာ please contact retailer ဆိုတာမျိုးလာပေါ်တယ်..
(ကျတော်သည် ဆော့ဝဲသမားပေမို့သာပေါ့.. မဟုတ်ရင်တော့ ရှော့အကြီးကြီးပေါ်ပီ..)
hard format လုပ်လိုက်မှပဲ စက်တက်လာတယ်.. (ရှိသမျှလေးတွေတော့ အမွှေးတောင်မကျန်ပဲ ကျွတ်ကုန်တော့တယ်.. .ဟီးဟီ..)
သူ့ မူရင်းလိပ်စာက အပေါ်ကဟာဖြစ်မယ်ထင်တယ်၊ ဖိုင်ကိုတော့ sybiantalk မှာတင်ထားတာ
မူရင်းလိပ်စာက အပေါ်ကဟာဖြစ်မယ်ထင်တယ်.. sybiantalk မှာက attachment တင်ထားတာ
I am Aung Naing Oo.(Symbian Myanmar-software creator).For Update error-Uninstall Font routor.for Consider by certificate-Delete file certificate.s60 V5 phones are n5800,n97,n5530 and x6.Other Phones are not support.download link- http://gallery.mobile9.com/f/1183907/ .Now,I finished SymbianMyanmar v2.0.I fix the problem of v1.0. Please contect me,စိုင်းညီဖြိုး .My gmail is [email protected]
nokia holder says:
ဒီ Post ကို တင် တဲ.လူ ရူးများရူးနေလားမသိဘူး။ SymbianMyanmar က တော်တော် အသုံးဝင်တဲ. software ဗျာ။ SNP -ခင်ဗျား က software သမားဆို ပြီး မသွင်းတတ်တာ တော်တော် အံ့သြ ဖို.ကောင်းတယ်။ English စာကောင်းကောင်းဖတ်တတ် ရင် သွင်းလို.ရတယ်။ nokia 5800 ပါ ဆိုမှ N95 မှာ သွင်းလို.မရဘူးလို.ပြောတာ SNP တစ်ယောက်ဘဲ တွေ.သေးတယ်ဗျာ။
ပထမနေ့ညက စမ်းစရာမရှိလို့ n95 မှာသွင်းလိုက်တာ အဆင်မပြေဘူးလို့ပြောတာပါ၊
ဒါနဲ့ ဒုတိယမနက်မှာပဲ 5800 နဲ့စမ်းတာကို အဆင်မပြေခဲ့တာပါ..
(p.s. ကိုအောင်နိုင်ဦးကိုစောရီးလို့ပြောပါရစေ၊ ဒီနေ့မှ reply လုပ်တာကို
ကြည့်မိလို့ပါ.. အခုလို reply လုပ်တဲ့အတွက်လဲ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်)
LOL!!! I don’t know about Nokia and I don’t interest symbian. Most of my friend try and it’s not OK. Can install but font display is wrong. Look like Install Zawgyi font with font-router. If we want to display correct in Nokia, we need to fix the font. Problem isaunicode and nokia have contrain render program but it’s wrong rendering for Myanmar.So, can’t use myanmar unicode 5.1 and Zawgyi. If we want to use Zawgyi, one solution is fix the font.
I luv iPhone and Android 😛
gallery.mobile9.com/f/1283465 က 5800 အ တွက် symbianmyanmar3က file not found ဖြစ် နေ တယ် ဗျာ။ ဘယ် လို လုပ် ရ မ လဲ၊
ဒီဖိုင် နှစ်ဖိုင်က symbianMyanmar v 3.0 ရဲ့ ဒေါင်းလုပ်လင့်ခ် ပါ။ ကျွန်တော် ဒေါင်း ပြီး OPDA မှာ sign လုပ် ပြီးပါပြီ။ သွင်းတဲ့ အခါမှာတော့ ပြသနာတက်တာ ပါပဲ။ unable to install.. component is built-in ဆိုပြီးပြပါတယ်။ ကျွန်တော့် 5800 က jailbrak လဲ မလုပ်ထားပါဘူး။ ဟက်လဲ မဟက်ထားပါဘူး။ symbianMyanmar v 2.0 ကတော့ သွင်းလို့ရပါတယ်။ မြန်မာလို လဲ ပေါ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် စာလုံးတွေ ထိပ်ပျက်နေတယ်။ ဘယ်လို မှ ကြည့်မကောင်းတာနဲ့ ပြန်ဖျက်လိုက်ရတယ်။ မြန်မာလို သုံးနိုင်မယ် ဆိုရင် ဝမ်းသာအားရဖြစ်မိမှာပါ။ ကိုအောင်နိုင်ဦး တင်ထားတဲ့ link က ဖိုင် မရှိတော့ပါဘူး။ သူကိုယ်တိုင်ပဲဖျက်သွားတာလား။ expire ပဲ ဖြစ်သွားတာလားတော့ မသိပါဘူး။
symbianMyanmar v 3.0 ကို ဘယ်လို သွင်းရမလဲ ဆိုတာ အသေးစိပ်ပြောထားတဲ့ web site တစ်ခုကနေ link ရတာပါ။ အဲ့ဒီ့ ဆိုဒ်က http://www.myanmarchatonline.org/forum/index.php?topic=31457.0 ။ ကျွန်တော်ကတော့ သွင်းလို့မရပါဘူး။ စမ်းကြည့်ချင်တဲ့သူတွေ အဆင်ပြေအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ သွင်းလို့ရတယ်ဆိုရင် လဲ အဆင်ပြေမယ့် နည်းလမ်းလေး မစပါခင်ညာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့ါ ဖုန်းက N70 ဆိုတော့ Symbian S60 V2 ဖြစ်နေတယ်ဗျ..
အဲဒီ့မှသုံးလို့ရတဲ့ မြန်မာ font tools ရောရှိဝူးလားဗျာ…
i can,t upload symbian myanmar v3.0 ( file size is 3.37 MB ) is it really file size? ple help me
For Nokia 5800 Software
Wanted Myanmar Font
I don’t know about nokia. Ask in http://www.mysteryzillion.org
how to solve certificate problam?OPDA is not working…
ask in mysteryzillion.org , please
where is the certificate sebsite..Opda is not working …please…
Zayar Aung says:
Can u say that Email, My Ph: 092042591